यो ग्लोबलाइजेशनको यूग हो, नेपाल ग्लोबलाइज्ड हुन पाउने कि नपाउने? | सिमान्तMarginal यो ग्लोबलाइजेशनको यूग हो, नेपाल ग्लोबलाइज्ड हुन पाउने कि नपाउने? – सिमान्तMarginal
नेपालले यति लामो समयसम्म भारतसंग ‘रोटि-बेटि’ ‘सौहार्द’ सभ्यता-संस्कृति’ र ‘खुला सिमाना’ भनिने सम्बंधबाट के पायो ? अस्थिरता र गरिवी! हुँदा हुँदा मधेश आन्दोलन र सिके रावतहरु! एउटा आन्दोलनको समाप्तिसंगै आर्को आन्दोलनको विजारोपण! नभए, कसैसंग योभन्दा फरक जवाफ छ?
भुकम्पले थिल्थिलिएको नेपालीलाई नाकाबन्दीको उपहार दिएर औषधि, रगत र अक्सिजन समेत ठप्प पारेको भारतले छिमेकीलाई दिन सक्ने कठोर निर्दयी यातना अब बुझ्न बाँकी रहेन। सार्बर्भौम संसदको ९५ प्रतिशत सदस्यले प्राजातान्त्रिक तवरबाट अनुमोदन गरेर लागु गरेको सम्बिधानको बिरोध गर्ने भारतको प्रजातन्त्र पनि अब बुझ्न बाँकी केहि रहेन। यी सबै कामहरु गरेर भारत स्वयंले नेपाललाई यौटा सन्देश दिएको बुझ्नु पर्छ- कि तिमीहरु आफ्नो हितका निम्ति काम गर।
नेपालले भारत वा कुनै पनि मुलुकको अहित गर्नु हुन्न। अहित नगर्नु भनेको उसका ‘इन्ट्रेष्ट’ लाई बुझ्नु हो र उसले असहज महसुस गर्न सक्ने इस्स्यूलाई छलफल र रणनीतिको माध्यमबाट समाधान खोजिनु हो। तर आफ्नो बिकासको निम्ति हामि कसैसंग सम्बन्ध बिस्तार गर्दैछौं र त्यसमा उ नाराज देखिन्छ र ‘नाङ्गो’ रूप धारण गर्छ भने भन्न सक्नु पर्छ कि- हामिलाई हाम्रो काम गर्न देउ। कसैको इशारा पर्खिन जरुरि छैन। यो यूग ग्लोबलाइजेशनको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरि छ।
वर्तमान ओली सरकार गलत हुन सक्छ। बिषेशत: त्यस्तो गल्ति पहिल्याउने काम प्रतिपक्षको हो। तर नेपालको हितमा भए गरिएका काम कुराहरु छन भने त्यसलाई पचाउन, सम्मान गर्न पनि सिक्नु पर्छ। ओली चीन गएर नेपालको हितमा केहि राम्रा सम्झौता गरेका छन। त्यो सम्झौता हुँदा टाउको दुख्ने भारतलाई हो। भारतले छिमेकमा गरेको कमजोरीको फाइदा उठाएको हो- चीनले। त्यसैले भारतले गल्तिको महसुस गर्न सक्नु पर्छ। हामी नेपालीलाई किन टाउको दुख्नु पर्यो!
अब नेपालले निम्न कुरामा आफुलाई प्रष्ट राख्नै पर्छ र सोहि अनुसार अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्छ-
नेपाल विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य हो, उसले स्वतन्त्र ब्यापार गर्न पाउने कि नपाउने?
नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा ब्यापक सुधार गर्दै आयो, त्यस अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मान्यतामा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने?
नेपालमा बढ्दो जनसंख्याका कारण जनाकांक्षा चुलिएको छ, त्यसको परिपूर्तिका लागि उत्पादन र बितरणको ब्यबस्थामा बिस्तार गर्ने कि नगर्ने?
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो, त्यस अनुसारको सुविधा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?
नेपाल संयूक्त राष्ट्र संघको सार्बर्भौम स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्र हो, उसले त्यो सम्मान प्रत्याभूत गर्न पाउने कि नपाउने?
नेपालले छिमेकीको हित हेर्नु पर्छ भने छिमेकीले पनि नेपालको हित हेर्ने कि नहेर्ने?
यदि कोहि कसैको स्वार्थका कारण नेपालले त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन भने अबरोध खडा गर्नेहरुसंग संगै हिडने औचित्य सकिएको ठान्नु पर्छ वा संगै हिंड्न सक्ने वातावरण तयार हुनु पर्छ। कुनै पनि समस्या विकल्प रहित हुन सक्दैन। एक ढिक्का हुने दिन आयो नत्र नेपाल र नेपालीको अवस्था स्यालले चिललाई देखाएर चल्ला चोरे जस्तै हुनेछ।
Previous Postसंचारले बाँच्नका लागि लेख्नु पर्ने अवस्था आयो भने चौथो अंगको अस्तित्व रहँदैनNext Postगुगलले प्रयोगकर्ताले सर्च हिस्ट्री मेटाउन के गर्ने त?